नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो ‘घोषणापत्र’ पढ्नुभयो ?::देश र जनताप्रति समर्पित
दक्षिणपूर्वी एसियामा चलिरहेको क्रन्तिकारी छाल हाम्रो प्यारो मुलुक नेपालमा पनि आई पुगेको छ । एक युग पुरानो सामन्ती अत्याचारलाई हाँक दिँदै नेपालको मजदुरवर्गले पहिकोपल्ट मार्च १९४७ मा संग्राममा प्रवेश गर्‍यो । विराटनगर जुट तथा कपडा मिलहरूका मजदुरहरुले बाँच्नलायक ज्याला र कामगर्ने राम्रो अवस्थाका लागि हडताल गरे । गुप्त रूपमा क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको मजदुर युनियनले त्यसको नेतृत्व गर्‍यो । भारतको विश्वासघाती समाजवादी नेता र निष्कासित राणाहरूद्वारा समर्थित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस नेताहरूले हडतालप्रति विश्वासघात गरे । हडतालको छाल राजधानीमा पनि फैलियो । काठमाडौँमा, बिजुली तथा टक्सार विभागका सरकारी कर्मचारी र बैंक तथा अस्पताल कर्मचारीहरूले त्यस्तै मागहरू राखेर हड’ताल गरे । हडतालीहरू कति दृढ थिए भने सरकार तलब बढाउन र राशन दिन बाध्य भयो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र तलबबृद्धि र अन्न खरिद सुविधाहरू सीमित भए पनि नेपालका सम्पूर्ण जनताले त्यसलाई आफ्नै विजयको रूपमा लिए र आफ्ना अधिकारहरूको सुरक्षार्थ जनसङ्घर्षको खाँचोलाई बुझे ।
मुलुकमा अझसम्म आत्मनिर्भर प्राकृतिक अर्थतन्त्रको प्रभुत्व छ, तर यो मर्दो रूपमा छ । किसानहरूले आफ्नो खाद्यान्न मात्र होइन आफूले उपयोग गर्ने धेरैजसो चीज आफै पैदा गर्छन् । राणा, जमिन्दार, द्वारे, ठालु र मुखियाहरूले किसानहरूबाट उठाएको तिरो आफ्नै व्यक्तिगत मोजमज्जामा खर्च गर्छन् । पहिले सो तिरोलाई चीजहरूको साटासाटमा प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले सामन्ती परजीवीहरू यस्तो प्रणाली लागु गरेका छन् तापनि त्यसको अझसम्म निर्णायक प्रभाव छैन ।
अतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी जनताको विकासशील संघर्षमा सहभागी बन्ने र त्यसलाई संगठित पार्ने तथा नेतृत्व दिने र त्यसलाई विजयसम्म अघि बढाउने काममा आफूलाई समर्पित गर्दछ । यसलाई सो बाटोबाट जस्तासुकै आतङ्क वा झुठो प्रचारले विचलित पार्नसक्ने छैन । अन्य पुँजीवादी तथा निम्नपुँजीवादी पार्टीहरूले पहिले जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन् र पछि पनि गर्दै रहने छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद-लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढेको पार्टीले आँधीबेहरीमा जनताको साथ दिनेछ र यसले के प्रतिज्ञा गर्छ भने यसले सच्चा स्वतन्त्रा तथा लोकजनवादका लागि संघर्षको अघिल्लो पंक्तिमा सदा अडिग भई लडिरहने छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शोषकहरूलाई ठो’क्ने जनताको मुड्की हो । तसर्थ हामी मजदुर वर्ग, भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूका सर्वोत्तम छोराछोरीहरूलाई र जनवादी विद्यार्थी, युवा तथा महिलाहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जुझारू पंक्तिहरूमा सामेल हुन आह्वान गर्दछौँ किनभने एउटा बलियो, जन आधारित कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र जनताको लोकजनवादी क्रान्तिकलाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गरी विजयसम्म अघि बढाउन सक्दछ ।
(साभारः पुष्पलालका छानिएका रचनाहरू, भाग-१)
संशोधनवादबाट मार्क्सवादलाई बचाउन दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको संशोधनवादी सुधारवादी धारासहित नेपालमा क्रियाशील यस धाराका विरुद्ध वैचारिक संघर्षमा अग्रपंक्तिमा रहेर, दृढतासाथ संघर्ष गरेर मात्रै मार्क्सवाद–लेनिनवाद तथा माओ विचारधाराको...